Hooya Soomaaliyeed oo war naxdin leh ka soo sheegtay Hindiya
Home » WARARKA MAANTA » Hooya Soomaaliyeed oo war naxdin leh ka soo sheegtay Hindiya	Hooya Soomaaliyeed oo war naxdin leh ka soo sheegtay Hindiya
18/05/2017	1,014 Views Khadra Cabdinuur, oo ka mida ehellada dhallinyaro Soomaaliyeed oo ku jira xabsiyada dalka Hindiya, ayaa waxa ay ka sheekaysay wixii ay soo aragtay ka dib booqasho ay dalkaas ku tagtay.
Khadra, oo warbaahinta gudaha la hadlaysay, ayaa waxa ay ka deyrisay xaaladda maxaabiista Soomaaliyeed ee ku jirta xabsiyada Hindiya, kuwaas sugaya xukunno dil noqon kara.
Waxa ay dhaliishay safaaradda Soomaalida ee dalka Hindiya, oo ay ku tilmaantay mid aan ka warqabin xaaladda maxaabiista Soomaalida, waxaana ay dowladda Soomaaliya ka codsatay in laga soo wardoono dhallinyarada halkaas ku xiran.
Dhallinyaradan ayaa mar hore waxaa lagu xukumay dil; balse dadaal ay sameeyeen qaar ka mid ah jaaliyadda Soomaalida ayaa lagu suurtageliyay in la baajiyo fulinta xukunka lagu riday.
Khadra, ayaa sheegtay in 25-ka bishan May ay mar kale furmi doonto maxkamadda lagu qaadayo dacwadda loo heysto dhallinyaradan, taas oo laga yaabo in markan ay xukunkii ugu dambeeyay ku riddo dhallinyarada.
Ugu dambeyn, haweenaydan ayaa waxa ay dowladda Soomaaliya ka codsatay in ay wefdi u soo dirto la-socoshada maxkamadda dhawaan furmaysa, si ay dhallinyaradu u helaan dad iyaga metela oo xaqooda soo dhiciya.
Dhallinyaradan ayaa -badankooda- waxa ay ku eedeysan yihiin dembiyo la xiriira burcadbadeednimo, waxaana ay xabsiyada Hindiya ku jiraan muddo badan, oo ay xukunnadooda sugayeen.
Previous: Xog muhiima: Soomaalilan oo rejo cusub ay u muuqatay
Next: War deg deg ah: Ciidan Gadoodsan oo goordhaw la wareegay xarunta wasaaradda gaashaandhigga